AXKAAMTA RAMADAANTA QORE: SH. CABDIRISAAQ CABDIRAXMAAN XASAN RAKUUB QAYBTII 1AAD | Maalmahanews
AXKAAMTA RAMADAANTA QORE: SH. CABDIRISAAQ CABDIRAXMAAN XASAN RAKUUB QAYBTII 1AAD
Culimadaasi waxa ay yidhaahdaan waxa ay ka joogsatay hadalkii ; sidaa darteed ayey u adeegsatay odhaahda ah soon iyada oo ula jeedda aamusni. Markaa haddii ay ka joogsigii hadalka u adeegsatay erayga soon innaguna waxa aynu u qaadanaynaa in eraygaasi yahay ka joogsi laga joogsanayo wixi Alle SWT faray in laga joogsado, gaar ahaan xilliyada Ramadaanta iyo xilliyada kale ee qofku Alle SWT u sooman yahay.
Qofka Muslinka ah
Qofka qaan-gaadhka ah, ( qof aan qaan-gaadh ahayn waajib kuma aha soon, se haddii uu karayo loo diidi maayo)
Qofka maskax ahaan caafimaadqaba.